Magwaro Kunamatira Hukama Hwako | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Mavhesi eBhaibheri Magwaro Kunamatira Hukama Hwako
Magwaro Kunamatira Hukama Hwako
Nhasi tichange tichishanda nemagwaro kunyengeterera hukama hwako. Kusvika padanho rakakura, mhando yehukama hwatinopinda mairi ndiyo ichaona kuti hupenyu hwedu huchafambira mberi zvakadii. Hukama hunogona kutapira uye kudanana kubva pakutanga asi iyo nguva iyo dhiabhori yaanorova, hukama hunogona kuve hwakasviba. Kana ukavimbisa kukupa iwe mudiwa ingave murume kana mukadzi, hazvina kukwana kumirira uye kutarisira kuti murume kana mukadzi auye muhupenyu hwako muchidimbu chimwe.
Kunyangwe paunenge wakamirira, iwe unofanirwa kupindirana uchimiririra hukama. Muvengi acharova chero nguva munguva. Chinyorwa chakayambira kuti mhandu yedu yakaita seshumba inodzvova, ichienda mberi neshure ichitsvaga wekudya. Chimwe chezvikonzero icho muvengi anorwisa hukama kubva padanho rekudanana ndeyekuti haadi kuti vaviri vagadzikane muwanano. Dhiyabhorosi anonzwisisa kuti muchato mubatanidzwa wakarongedzwa naMwari pachawo wemunhu. Kune akawanda maropafadzo akasungirirwa muchato kana munhu akaroora nenzira kwayo. Hazvishamisi kuti rugwaro runoti, mumwe achadhonza chiuru uye vaviri vachadhonza zviuru gumi.
Chinhu chekutanga icho muvengi anorwisa mumubatanidzwa kubatana kwechinangwa. Rangarira iro rugwaro rinoti vaviri vanogona kufamba pamwe chete kunze kwekunge vabvumirana? Kana muvengi akakanda hundi yekusawirirana muhukama, hukama hwakadai huri pamucheto wekurambana. Pasina mubvunzo kutaura kuti hapana chikonzero chekupinda muhukama kana zvikasazotungamira mukuroora. Ichi ndicho chikonzero zvakakosha kuti unamate zvine simba nekuda kwehukama hwako. Usango gara pasi wotarisira kuti zvinhu zviwire munzvimbo yazvo, simudza chiyero chinopesana neantics dzadhiabhorosi.
Kana iwe uchinzwa kuti pane kudikanwa kwekunamatira hukama hwako, shandisa magwaro anotevera kunamata:
1 Petro 4: 8 Uye pamusoro pezvinhu zvose dananai nemoyo wese, nekuti "rudo runofukidza zvivi zvizhinji."
Shandisa iyi ndima yeBhaibheri kunamatira rudo. Iko kune geniune rudo kuripo, dhiabhori haazove nenzvimbo ipapo. Kana rudo rwehukama rukatanga kuderera, hazvinganetsi kuti muvengi arove. Namatai kuti Mwari vaise mumoyo menyu vaviri mweya werudo.
Ishe Jesu, ndinonamata kuti mutipe nyasha dzekuzvida isu pachedu. Sokuda kwawakaita kereke, tidzidzise kuzvida isu tisina gwapa.
Hukama uhu hwakavakirwa pashoko raMwari. Baba Tenzi, ndinonamatira mhando yerudo runonzwisisa, mhando yerudo runoregerera, ndinonamata kuti mutipe muzita raJesu.
VaEfeso 4: 2-3 nekuzvininipisa kose neunyoro, nemoyo murefu, muchiitirana moyo murefu murudo, muchiedza kuchengetedza kubatana kweMweya muchisungo cherugare.
Shandisa chikamu ichi kunamata kuti Mwari vakupe mweya wekunzwisisa muhukama hwako. Kumbirai nyasha dzekutsungirira nekushivirirana murudo. Imwe yehunhu hwakaipa hunoshandiswa nemuvengi kupokana nemutendi kushaya kwekunzwisisa. Kana iwe usingakwanise kunzwisisa kana kushivirira mumwe wako, hukama hwacho hwakananga kudombo kare.
Baba Tenzi, ndinonamata kuti nyasha dzinzwisise mumwe wangu. Ndinokumbira kuti mundipe mweya wekunzwisisa kuti kunyangwe ivo vasiri kuita chero yakajeka pfungwa, ini ndicharamba ndichivanzwisisa. Ndinonamata kuti nyasha dzikame kunyangwe pakatarisana nedambudziko, ishe, ndisunungureiwo muzita raJesu.
Ishe, ndinokumbira kuti mundipe nyasha yekuregerera mumwe wangu. Nyasha dzekushivirira kudarika kwake kana kushomeka kwake apo isu tichiedza kusvika pakukwana, Ishe ndisunungurei ini muzita raJesu.
Zvirevo 15: 1 mhinduro nyoro inodzora kutsamwa, asi shoko rinorwadza rinomutsa hasha.
Shandisa iri bhaibheri vhesi kuti unamate uchipesana nemweya wehasha. Iwe unofanirwa kuziva kuti kutsamwa hakugadzirise dambudziko, asi zvinounza mamwe matambudziko. Isu tinoita uye kutaura zvinhu zvakawandisa zvatisingareve kana tatsamwa. Pakupedzisira kutsamwa kwedu kuchadzikira asi mazwi atakataura anogara mundangariro dzevanhu vatinokuvadza neshoko redu.
Baba Tenzi, ndinonamata kuti mundidzidzise kuramba ndakadzikama. Ndinouya kuzopesana nemweya wehasha. Ini ndinoramba kubvumira kutsamwa kuparadza hukama hwandakabatsirwa naMwari kuvaka. Ndipeiwo nyasha yekunzwa hasha painenge ichivaka, ndipe simba rekuzvidzivirira muzita raJesu.
Ishe, ndinonamata kuti nyasha dzitungamire muromo wangu nekuburitsa. Ini ndinotsvaga nyasha dzekunyarara kunyangwe pakatarisana nehasha dzinotyisa. Ishe ndipeiwo mukana wekunzvera mazwi emuromo wangu kunyangwe ndatsamwa zvakanyanya muzita raJesu.
VaEfeso 4:32 asi ivai nemoyo munyoro mumwe kune mumwe, muchinzwirana tsitsi, muchikangamwirana, sezvamakakangamwirwa naMwari nekuda kwaKristu.
Shandisa iri bhaibheri vhezheni kunamatira kuti Mwari vakupe nyasha dzekugara wakatendeka kuukama hwako kunyangwe paine kusanzwisisana. Kazhinji, kana paine kusanzwisisana kushoma, isu tinokurumidza kusiya hukama nekuti isu tinonzwa kuti hauchakwanise kubhururuka nekuda kwekupisa kwekanguva. Izvo, icho chingori chipingaidzo kuzadzisa chinangwa chaMwari chehukama ihwohwo.
Ishe Jesu, ndinonamata kuti munzwe moyo wangu nekudzikama kunyangwe zvese pazvinoratidzika kunge zvichikwira kumusoro. Ndipeiwo nyasha dzekuti ndichiri kutenda muhukama. Ndipe ini neruzivo kuti hukama hwakavakwa newe uye kuti uchiri kugona kununura mamiriro acho, muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamata kuti nyasha dzive dzakavimbika kuhukama hwangu. Kunyangwe kana hukama hwacho hwakuvara, ndipeiwo nyasha yekuvimba netariro mamuri moga pakurapwa. Ndinonamatira nyasha dzekuramba ndakamira, ndinotsiura marongero emuvengi kuti andibvise nemanzwiro ekurambwa muhukama hwangu, muzita raJesu.
Muparidzi 4: 9-10 Vaviri vari nani kupfuura mumwe chete, nekuti vane mubairo wakanaka pabasa ravo. Nekuti kana vakawira pasi, mumwe achasimudza shamwari yake; Asi ane nhamo uyo ari oga kana akawa, nekuti haana mumwe anomusimudza.
Shandisa chikamu ichi cherugwaro kunamatira kuti iwe nemumwe wako muve mubatsiri wemagumo. Muri vaviri hamusi muhukama chete, Mwari arikugadzirirai mese kuti muve vabatsiri vejambwa mune ramangwana riri pedyo. Ndosaka rugwaro rwuchiti vaviri vari nani kupfuura mumwe chete. Kana mumwe wavo akawa, mumwe wacho anogona kuvasimudza.
Ishe Jesu, ndakamira pachinzvimbo chekubatsira mumwe wangu. Ini ndinoramba kushandisa hupfumi hwake uye ndomushandisa kwaari. Ini ndinonamata kuti iwe undidzidzise kuti ndive nani mweya mweya uye ramangwana mudiwa. Ini ndinoramba kuva ngwavaira yavo huru muhupenyu nezita raJesu.
Ishe Jesu, zvamakandiita mubatsiri wemumwe wangu, ndinonamata kuti pasava nemunhu achatora nzvimbo yangu muzita raJesu.
Previous nyayaKunamata Points Kugadzira Imba Yako Imba Yehondo
inoteveraMavhesi eBhaibheri Kunamata Kana Iwe Uchinzwa Kurambwa
Minyengetero yeKisimusi Kune Mhuri
Kunamata Kunongedzera Kupokana Netsaona